OnePlus အကြောင်းသတင်းများ - ပစ်လွှတ်ခြင်း၊ မိုဘိုင်း၊ root နှင့်အခြားအရာများ - Androidsis | Androidsis
OnePlus သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်တည်ထောင်သည့်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Android တွင်မကြာသေးမီကတည်ထောင်ခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်စမတ်ဖုန်းများထုတ်လုပ်ရန်အဓိကရည်ရွယ်ထားသော်လည်း ၄ င်းတို့သည်ကိုယ်ပိုင်တီဗွီကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်လည်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ၎င်းသည် high-end အကွာအဝေးအတွင်းရှိဖုန်းများစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။
OnePlus သည်တစ်နှစ်လျှင်ဖုန်းအနည်းငယ်စတင်ခြင်း၏နည်းဗျူဟာတွင်ထင်ရှားသည် (များသောအားဖြင့်နှစ်ခု) ။ အချို့သောမော်ဒယ်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏ကောင်းမွန်သောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဈေးနှုန်းချိုသာမှုရှိသည့်အပြင်၎င်းတို့အကွာအဝေးအတွင်းတွင်တတ်နိုင်သည်။ ဤနေရာတွင်သင်သည် operating system အဖြစ် Android နှင့်အတူ OnePlus ဖုန်းများ၏သတင်းများ၊ သတင်းများနှင့်သုံးသပ်ချက်များအားလုံးကိုရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။
por DaniPlay လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
OnePlus ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလများစွာထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်၎င်း၏ ၀ င်ရောက်မှုအသစ်သည်အဘယ်သို့ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
por အာရုန်သည် Rivas လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း .
နောက်ဆုံးတွင် OnePlus သည် OnePlus9စီးရီးစမတ်ဖုန်းသစ်နှစ်မျိုးကို quintessentialentialships အဖြစ်ပြသခဲ့သည်။
OnePlus9ပတ် ၀ န်းကျင်မှမျှော်လင့်ချက်များသည်မြင့်မားသော်လည်း၊ ငါတို့လာမယ့်သင်္ဘောအကြောင်းပြောနေတာ ...
OnePlus 8T ရဲ့ကင်မရာကကောင်းပေမယ့်ထိပ်တန်းအဆင့်အထိမမှီပါဘူး [Camera Review]
မျိုးဆက်သစ်များအဆင့်မြင့်ဖုန်းများနှင့်အတူဓာတ်ပုံအဆင့်တွင်သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်သည် ပို၍ ကြီးသည်။
OnePlus Nord သည်တည်ငြိမ်သော OxygenOS 11 နှင့် OnePlus7နှင့် 7T စီးရီးများ Open Beta3ကိုရရှိသည်
OnePlus သည်၎င်း၏စမတ်ဖုန်းအတော်များများအတွက် software updates အသစ်များကိုကမ်းလှမ်းနေပြီဖြစ်သည်။ OnePlus Nord သည် ...
မတ်လ ၂၃ ရက်သည် OnePlus 23 နှင့် OnePlus Watch တို့အတွက်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ဖြစ်သည်
por Manuel Ramirez လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်း .
မတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင်တရုတ်ကုမ္ပဏီသည် OnePlus9စီးရီးကိုစတင်ဖြန့်ချိရန်အတည်ပြုသည့်အခါဖြစ်နိုင်သည်။
OnePlus သည် OxygenOS 10.5.11 အဖြစ်ရောက်ရှိလာသည့် OnePlus Nord အတွက် software update အသစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒီဟာက ...
OnePlus9၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၏အစိတ်အပိုင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသ
por Nerea Pereira လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်း .
အမှန်တရားကတော့ OnePlus9နဲ့ OnePlus9Pro နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယိုစိမ့်မှုဟာမရောက်ရှိပါဘူး။
OnePlus9နှင့် OnePlus9Pro တို့သည်သေတ္တာထဲ၌အားသွင်းပါလိမ့်မည်
တယ်လီဖုန်းလောကတွင်ပထမလများအတွင်း (သို့ ... ပြောင်းလဲရန်) အချိန်တိုင်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်သည်။
လာမယ့် OnePlus9၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအကြောင်းပြောသောကောလာဟလများအများအပြားထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
OnePlus 8, 8 Pro နှင့် 8T တို့သည်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်တိုးတက်မှုများဖြင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုရရှိသည်
OnePlus 8, 8 Pro နှင့် 8T သည် firmware package အသစ်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိနေပြီဖြစ်သည်။
OnePlus 6T ကိုအောက်တိုဘာလတွင်စျေးနှုန်းတိုးမြှင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်
OnePlus6ဗားရှင်းနှစ်ခု၏စျေးနှုန်းကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
OnePlus 280 ကိုဝယ်ပါက OnePlus သည်ယူရို ၂၈၀ အထိလျှော့စျေးပေးထားသည်
အသစ်ဖွင့်ပြသည့် OnePlus6ဒီဇိုင်း
OnePlus 5T ကို lava အနီရောင်တွင်ကြေငြာခဲ့သည်
OnePlus 5T အသစ်၏နောက်ခံပုံများကိုကူးယူပါ
၎င်းသည် OnePlus 5T ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်
OnePlus 5T သည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အလွန်သာလွန်သောကင်မရာများရှိနိုင်သည်